2004 मा सुनामी, भारतीय महासागर। 2004 भारतीय महासागर भूकम्प र सुनामी
थाईल्याण्ड अब दुनिया फरक देशका मान्छे बाँकी प्राप्त गर्न हतारमा जहाँ सुन्दर र लोकप्रिय रिसोर्ट्स, संग, तर पनि XXI सताब्दी को शुरुवात मा यहाँ ठाउँ लिए कि भयानक त्रासदी संग मात्र होइन सम्बन्धित छ छ। यो राज्य धेरै हदसम्म प्रकोपबाट प्रभावित छ। भुकम्प ट्रिगर मा एक सुनामी भारतीय महासागर 2004 मा, माथि मात्र थाईल्याण्ड बारेमा 8.5 हजार। जनता जीवनमा रोज्नुहोस्। सामान्य मा, यो प्राकृतिक प्रकोप संसारको 18 देशहरूमा विनाशकारी भएको छ।
डिसेम्बर 26 को बिहान, एक विशाल भूकम्प को उत्तर पश्चिमी तट बन्द हलचल मच्चाएका सुमात्रा को (इन्डोनेशिया)। यसको परिमाण पछि विद्वान9अंक भन्दा कुनै कम थियो मूल्यांकन भएको थियो। यो सबैभन्दा शक्तिशाली भूकम्प कहिल्यै रेकर्डमा रेकर्ड को एक भए।
यसको बल प्रमाण पनि बर्मेली र भारतीय भन्ने तथ्यलाई छ tectonic प्लेट, जो सुमात्रा द्वीप को स्थान को ठाउँमा जडान, एउटा ठूलो दूरी सरेको छ। बारेमा 1200 मी नस्ल 15 मिटर द्वारा लगभग एकै रातमा सारे, र यो संग, र द्वीप को एक नम्बर, क्षेत्र बन्द गर्नुहोस्। गति मा tectonic प्लेट को त्यो पारी 2004 मा भारतीय महासागर मा एक प्रमुख सुनामी मा गरिएका जो पानी को एक विशाल शरीर।
आश्चर्य को तत्व
एक दुःखद संयोग द्वारा, विदेशी पर्यटक र फुकेत को भीड रिसोर्टमा द्वीप संग धेरै लोकप्रिय यो प्रकोपबाट अघि पूर्ण कमजोर थियो। को tremors तट टाढा यद्यपि, भयो छ, तर न त थाई न त पर्यटकहरु व्यावहारिक महसुस छैन भन्ने तथ्यलाई। र केहि र महसुस गर्नेहरूलाई, यो कुनै पनि महत्व संलग्न छैन।
लगभग तुरुन्त 2004 मा भारतीय महासागर मा भूकम्प सुनामी पूर्ण आश्चर्य थियो पछि भयो। थाईल्याण्ड को पश्चिम तट अन्य देशहरूमा जस्तै गम्भीर खतरा को संकेत गर्न सकेको छैन त्यसैले छिटो नजिक विशाल छालहरू। कि राज्य को अधिकारीहरु यस्तो शक्ति एक सुनामी कहिल्यै सामना गरेका थिए। कुनै सुरक्षा प्रणाली बस तत्व विरुद्ध अवस्थित छैन छ कि यो त्यसैले अचम्मको छ। मान्छे बिल्कुल यस्तो अवस्थामा के थाहा थिएन।
छिट्टै शोकमा अघि
कसैले अपेक्षा सम्भावित भारतीय महासागर मा एक सुनामी जस्तै, यस्तो ठूलो मात्रा प्राकृतिक प्रकोप को घटना छ। डिसेम्बर 2004 सफल भयो। विशेष गरी महिनाको अन्त, रूपमा यहाँ सामान्यतया विदेशी देश मा नयाँ वर्ष हेर्न चाहने विदेशी पर्यटक हतार। तर धेरै मान्छे को लागि छुट्टी को प्रतीक्षा, एक डरलाग्दो सपना मा गरियो।
बिहान मौसम सुन्दर थियो र सबैले मामिलामा संलग्न थियो। थाई काम गर्न जाँदैछन्, र पर्यटक आरामदायक होटल को कोठा मा वा समुद्र तट मा आराम। र यो केही समस्या portends, देखिन्थ्यो। तर त्यसपछि अचानक असाधारण अमरीकी मान्छे को आँखा अघि नै प्रस्तुत। यो साँच्चै एक विशाल ज्वारभाटा थियो। एक आँखा को झिम्काइ मा पानी गोले, माछा र अन्य एक निशान छोडेर किनारमा देखि फिर्ता लुढका समुद्री जीवन।
स्थानीय यस सजिलो क्याच आनन्द र पर्यटकहरु आफूलाई मुक्त स्मृति चिन्ह स्कोर गर्न प्रयास। केही बस, यो असामान्य प्राकृतिक घटना तिनीहरूलाई भिडियो क्यामेरा र क्यामेरा संग ल्याए तिनीहरूलाई धेरै हेर्न निर्णय गरेका छौं।
स्वर्ग नरक मा गरिएका
यो बिन्दुमा, कुनै एक भन्दा भयानक तिनीहरूलाई के आउँदै छ भविष्यवाणी सक्छ प्राकृतिक प्रकोप। 2004 सुनामी तेजी उचाइ 20 मिटर पुग्न विशाल रूखहरू परिवर्तन थिए खोक्रो पानी मा जो साधारण छालहरू, को रूप मा किनारमा सम्म चलाए। यो यति चाँडै मुक्तिको लागि समय बिल्कुल थिएनन् छ भयो। , पानी को एक पर्खाल द्वारा overtaken, मान्छे प्रकोपबाट देखि उम्कन खोजे तर बस मा गायब।
थाईल्याण्ड मा 2004 मा भारतीय महासागर मा सुनामी को सिकार को सबै भन्दा किनारमा नजिक थिए ती मा परे। 8.5 हजार 5.4 हजार देखि - .. यो 40 भन्दा बढी देशका यहाँ आउन जो पर्यटकहरु छ। सुनामी शक्ति पनि2किमी को एक दूरी मा छालहरू सय धेरै मीटर लागि देशी भयो, र केही ठाउँमा कि त ठूलो थियो।
प्रकाश घरहरू कार्ड जस्तै टाढा बह थिए। आवास राजधानी होटल उभिए, तर तिनीहरूलाई मा Windows तुरुन्तै बन्द गरे, र तल्लो फर्श थिए जो मान्छे, बच्न वस्तुतः कुनै मौका थियो। को लहर retreated गर्दा सबैतिर मानिसहरूको शरीर ढाकिएको देशमा, पर्दाफास, रूखहरू जरैसमेत उखेलिने र फलाम डिजाइन चपटे।
भन्न अनावश्यक, केहि तत्व को पहिलो झटका पछि बच्न भाग्यमानी थिए कि, दिन जो गर्दैन पूर्णतया के भइरहेको छ बुझ्न, र एक खतरनाक ठाउँ छोड्न आघात को एक राज्य थियो। तर यो अन्त छैन। लहर फिर्ता2थप पटक आए।
2004 मा भारतीय महासागर मा भूकम्प अभूतपूर्व शक्ति एक सुनामी कारण र थाईल्याण्ड मा छुट्टी मा मानव जीवन हजारौं दावी पछि, धेरै मान्छे अझै पनि पनि लाग्छ छैन। र व्यर्थमा! ब्रोशरहरू, जो अन्य कुराहरु, थाई तट को सुन्दर समुद्री तट मा पर्यटकहरु छुट्टी प्रस्ताव, शान्ति र सुरक्षा दिने प्रतिज्ञा। र म तिनीहरू सत्य धेरै नजिक छन् भन्न पर्छ। को पर्यटक सिजन यहाँ मात्र ड्राई मौसममा चल्छ भन्ने तथ्यलाई, जब लगभग कुनै वर्षा। त्यसैले, बाढी जोखिम लगभग शून्य कम छ।
को ज्वालामुखियों सन्दर्भमा, तिनीहरूले मात्र दुई हुन् र तिनीहरूले सुतेको हुन मानिन्छ। यो वृत्तचित्र को इतिहास मा एक एकल वास्तवमा आफ्नो eruptions गर्न attests भन्ने हो। यी ठाउँमा भूकम्प किनभने थाईल्याण्ड हाम्रो ग्रह को एक seismically शान्त क्षेत्र मा स्थित छ, असम्भाव्य पनि छ।
यसलाई समय समयमा पानी भूकम्प सागर भुइँमा हुन्छ कि ज्ञात छ। तिनीहरूलाई को एक थाईल्याण्ड को पश्चिम तट हिट कि 2004 को भारतीय महासागर सुनामी को विशाल छालहरू सुनेपछि। तर यो कुनै पनि तरिका यो पनि अक्सर हुनेछ कि होइन।
एक सुनामी को सम्भावना थाई किनारा मा नगण्य छ थियो। आफैलाई लागि न्याय: देश को उत्तरी भाग यसलाई मलेशिया संग सिमाना र पूर्वी समेट्छ दक्षिण देखि, को यूरेशियन महादेशमा सुरक्षित छ Indochina को प्रायद्वीप। यो पश्चिम तट गर्न रहनेछ। यस तर्फ देखि एक सुनामी को खतरा आउन सक्छ। जब हुनेछ अर्को भूकम्प परिभाषित गर्न असम्भव छ, तर हामी निर्धक्क भई भन्न सक्छौं यो चाँडै हुनेछ भनेर।
2004 भारतीय महासागर भूकम्प र सुनामी एक शक्तिशाली सुनामी को कारण थियो पछि, थाईल्याण्ड अन्तर्राष्ट्रिय गहिरो पानी प्रणाली साथ दिए। यो प्रकोप आउँदै को मामला मा प्रारम्भिक पत्ता लगाउने र चेतावनी उद्देश्य सिर्जना भएको थियो। सेन्सर प्रणाली अब थाईल्याण्ड को पश्चिम तट साथ स्थापित छन्। तिनीहरूलाई धन्यवाद, स्थानीय र पर्यटक आउँदै एक सुनामी चेतावनी हुन्छन् र खतरनाक क्षेत्रहरूबाट हटाउन सकिँदैन।
प्रणाली भाषाहरूको संख्या प्रदान गर्दछ, यो थाईल्याण्ड मा, विदेशीहरू फर्कन थालेका छन् भन्ने तथ्यलाई कारण छ। ज्ञात छ, यो देश मा पर्यटन व्यवसाय लगभग राष्ट्रिय अर्थव्यवस्था मा घनघोर विदेशी मुद्रा को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्रोत हो। तेजी विजयी यस्तो विनाशकारी भारतीय महासागर मा 2004 सबै रिजर्व मा सुनामी हालियो किन छ।
10 वर्ष पछि
तर यो दुःखद घटना थाईल्याण्ड मात्र प्रभावित भएको छ। एक विशाल लहर श्रीलंका, भारत, इन्डोनेशिया र 14 अन्य देशहरूको तट ढाकिएको, भारतीय महासागर सदस्यहरू रिम। तत्व क्षमता को कुल ऊर्जा सबै सैन्य projectiles सबै दोस्रो विश्व युद्ध मा विस्फोट पार, प्लस दुई परमाणु बम जापानी द्वीप मा गिरा कि वैज्ञानिकहरू गणना छन् - भन्ने भारतीय महासागर मा एक सुनामी शक्ति हो। दस वर्ष पछि, यो सिकार को सही नम्बर स्थापित भएको छैन। धेरै शरीर विशाल छालहरू द्वारा टाढा लगे। संयुक्त राष्ट्र 230 हजार। मानिसको एक आंकडा जारी, तर सत्य हामी कहिल्यै थाहा हुनेछ। विनाश बस भारी को मात्रा: बेघर 1.6 मिलियन मान्छे, र क्षति $ 15 अर्ब नाघेको छ।
को कण के महिना हराउन गर्दा? जब कण देखिने र गायब?
पिलाजिक माछा। प्रकार र वर्णन
Lamium एल्बम - एक तान्नु र बहुमूल्य औषधीय बिरुवा
पृथ्वीको सबै भन्दा ठूलो प्लेट को नाम। ग्रह गठन को संस्करण
Naturalist टिप्पणीहरू। संसारमा सानो जनावर - यो के हो?
कचौरा मा कुँदिएका - यो पुरानो छ, तर लोकप्रिय कला
Alphonse - एक आसान पेशा छ
आफ्नो मनपर्ने प्रेमिका जन्मदिन दिन के पत्ता
बच्चा को गलसुआशोथ उपचार: आधारभूत नियमहरू र सुविधाहरू
VALERY Vasiliev हकी खेलाडी: जीवनी
प्रोस्टेट को सुनिंनु: लक्षण, उपचार। यो खतरनाक रोग?
कसरी बोल्न र लेख्न: सङ्ख्याछैन वा नम्बर?
सिस्को routers: सेटिङ मोडेल। नेटवर्क उपकरण
"आर्थिक गतिविधि लग" के छ
को Byzantine साम्राज्य
रातो Profintern, महल Ponizovkina: एक सिंहावलोकन, इतिहास र समीक्षा